လန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရရှိစေမယ့် Kpop သီချင်းကောင်း (၁၀) ပုဒ်
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီကိုအံတုပြီး အမြဲလန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ခံစားချက်မျိုးရရှိစေမယ့် Kpop သီချင်းကောင်း (၁၀) ပုဒ်
Kpop သီချင်းတွေနားထောင်ရတာကြိုက်တဲ့ စာဖတ်သူပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ နွေရာသီအပူဒဏ်ကိုမေ့ပြီး ပင်လယ်လေညင်းအေးအေးလေးတွေလို ကြည်နူးလန်းဆန်းတဲ့ Mood မျိုးရစေမယ့် Kpop သီချင်းကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
နွေရာသီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ သီချင်းမြူးမြူးလေးတွေနားထောင်တာက သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါပေါ့ပါးကာ သီချင်းရဲ့စည်းချက်နဲ့အညီ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ တက်ကြွလှုပ်ရှားလာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် Kpop ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးမယ့်သီချင်းတွေထဲမှာ သင်ကိုယ်တိုင်လည်းအရမ်းကြိုက်ပြီး နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ Summer သီချင်းလေးတွေပါလာမလား စိတ်ဝင်စားရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်-
KARD အဖွဲ့ရဲ့ “Hola Hola” သီချင်းလေးက နွေရာသီနေ့ရက်တွေနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်ပြီး သူတို့ရဲ့သီချင်း MV ကတစ်ဆင့် ကမ်းခြေရောက်သွားသလို လန်းဆန်းတဲ့ခံစားချက်လေးကိုရစေမှာပါ။
SISTAR အဖွဲ့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ သီဆိုထားကြတဲ့ ဒီသီချင်းလေးကလည်း တစ်ခါလောက်နားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ စွဲစေပြီး နွေရာသီမှာ စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွသွားစေမယ့် လူသိအများဆုံး Summer သီချင်းတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
TOMORROW X TOGETHER- Our Summer
၂၀၁၉ ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ TXT ရဲ့သီချင်းလေးဖြစ်ပြီး နွေရာသီမှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်ရတဲ့ အမှတ်တရတွေကိုပြန်လည်သတိရစေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သီချင်းပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီအငွေ့အသက်တွေပြည့်နေတဲ့ Girls’ Generation အဖွဲ့ရဲ့ “Party” သီချင်းကလည်း နားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ လန်းဆန်းတက်ကြွလာစေမယ့်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
4MINUTE – Is It Poppin’
ဘယ်တော့မှမရိုးသွားတဲ့ 4MINUTE အဖွဲ့ရဲ့ Is It Poppin’ သီချင်းကလည်း နွေရာသီရဲ့ Stress တွေပြေစေမယ့် သီချင်းမြူးမြူးလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
အရင်နှစ်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ Alcohol Free သီချင်းလေးကလည်း ကမ်းခြေဘေးမှာအနားယူနေရသလို Fresh ဖစ်တဲ့ ခံစားချက်လေးရစေမယ့် သီချင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်နားထောင်ရုံနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွလာစေမယ့်သီချင်းလေးကတော့ SHINee အဖွဲ့ရဲ့ ‘View’ သီချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြားလိုက်ရုံနဲ့စိတ်ထဲစွဲစေတဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ ပုခုံးလေးတွေလှုပ်ပြီး လိုက် က ချင်လာမယ့်သီချင်းမြူးမြူးလေးတစ်ပုဒ်လဲဖြစ်ပါတယ်။
BLACKPINK (Feat. Selena Gomez) – Ice Cream
BLACKPINK အဖွဲ့နဲ့ အဆိုတော် Selena Gomez တို့ရဲ့ ‘Ice Cream’ သီချင်းလေးကလည်း နွေရာသီပူပူမှာ ရေခဲမုန့်လေး စားလိုက်ရသလို သင့်စိတ်ကိုလန်းဆန်းသွားစေမယ့် ထူးထူးခြားခြားသီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။
ZICO (Feat. Rain) – Summer Hate
နွေရာသီရောက်တိုင်းပူလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ဒီသီချင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ ပူလွန်းတဲ့နေ့တွေမှာ ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ နွေရာသီနေ့ရက်တွေကိုအမြန်ကျော်လိုက်ချင်တဲ့အကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အမိုက်စားသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
MyStyle Myanmar2022-06-07T10:49:43+06:30April 13th, 2022|Entertainment, တေးဂီတ – Music|